फेरि पनि विवादमा रामदेव, प'क्राउ गर्न डाक्टरहरुको माग - Sidha News
फेरि पनि विवादमा रामदेव, प’क्राउ गर्न डाक्टरहरुको माग
काठमाडौं । भारतमा योगगुरु रामदेव फेरि पनि विवादमा परेका छन् । यसअघि कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) बारे भ्रम फैलाएसँगै विवादमा मुछिएका उनी पछिल्लो समय भने आधुनिक औषधिको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको कारण विवादमा मुछिएका हुन् ।
हालै मात्र रामदेवले दिएको एक अभिव्यक्तिमा उनले आधुनिक औषधि लिएका हजारौं मानिसहरु कोरोना संक्रमणको कारण मृ’त्यु भएको बताएका थिए । साथै अक्सिजन सिलिण्डर पाउने प्रयास गरिरहेका मानिसहरुको मजाक उडाएका थिए ।
भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आलोचनापछि रामदेवले उक्त अभिव्यक्ति हटाएका थिए । यद्यपि त्यसपछि उनले आधुनिक औषधिमाथिको प्रहारलाई भने जारी राखे । उनले केही रोगमा औषधिले काम नगरेको भन्दै आधुनिक औषधिको विरोध गरेका थिए ।
रामदेवले चिकित्सकहरुको आलोचना गर्दै कोरोनाबाट मानिसहरुको मृत्यु हुनुमा उनीहरु दोषी रहेको बताएका थिए । रामदेवले लाखौं मानिसको मृत्यु आधुनिक उपचार पद्धतिको कारण भएको बताएका थिए।
भारतमा पारम्परिक उपचार प्रणालीलाई बढावा दिन आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी चिकित्सा, सिद्ध र होमोप्याथी (आयूष) मन्त्रालय नै छ ।
भारतका चिकित्सकहरुको संगठन इन्डियन मेडिकल एसोसिएसन (आईएमए) ले महामारीको बीचमा ‘संवेदनहीन’ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रामदेवको आलोचना गरेको छ । चिकित्सकहरुले रामदेवको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार र हतोत्साहित बनाउने किसिमको रहेको बताएका छन् ।
मे महिनाको शुरुआतमा रामदेवको अक्सिजन खोजिरहेका मानिसहरुमाथि मजाक गरिरहेको भिडियो भाइरल भएको थियो । अहिलेसम्म उक्त अभिव्यक्ति उनले कहिले दिएका थिए भन्ने स्पष्ट भएको छैन । यद्यपि उनले गत अप्रिल र मे महिनामा भारतका केही सहरमा अक्सिजन अभाव भएको सुनेको बताएका थिए ।
‘ईश्वरले हामीलाई निःशुल्क अक्सिजन दिएका छन्, हामीले किन त्यसलाई लिन सकिरहेका छैनौं ? ईश्वरले वायुमण्डलमा नै अक्सिजन भरेर दिएका छन् भने यसको अभाव कसरी हुन सक्छ ? मूर्खहरु अहिले अक्सिजन सिलिण्डर खोजिरहेका छन् । निःशुल्क अक्सिजन लेऊ । किन अक्सिजन छैन, बेड छैन, श्मसान छैन भनेर गुनासो गर्छौ ?’ भिडियोमा रामदेवले भनेका छन् ।
रामदेवको उक्त भिडियो भाइरल भएपछि यस विषयमा उनले यस विषयमा माफी माग्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यसको दुई सातापछि अर्को एक भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । जसमा रामदेवले चिकित्सकहरुको आलोचना गर्दै कोरोनाबाट मानिसहरुको मृत्यु हुनुमा उनीहरु दोषी रहेको बताएका थिए ।
रामदेवले लाखौं मानिसको मृत्यु आधुनिक उपचार पद्धतिको कारण भएको बताएका थिए । उनले आधुनिक उपचार पद्धतिको अभ्यास गरेर कोरोनाको महामारीमा तामासा गरिएको बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिपछि धेरैले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गर्दै रामदेवलाई पक्राउको माग गरेका थिए ।
दबाब बढ्दै गएपछि भारतीय स्वास्थ्यमन्त्री हर्ष वर्धनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अभिव्यक्ति हटाउन आग्रह गरेका थिए । अन्ततः उनले आफ्नो विवादित अभिव्यक्तिसहितको ट्वीट त हटाए तर अर्को दिन उनले एक पत्र लेख्दै आईएमएलाई आधुनिक औषधिले मधुमेह र हाइपरटेन्सनजस्ता रोग किन निको पार्न सक्दैन भन्दै पत्र लेखेका थिए ।
रामदेवको यो पत्रले मानिसहरुमा आक्रोश झनै बढायो । आईएमएले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेख्दै तत्काल रामदेवले गलत सन्देश फैलाउने अभियान बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो । साथै रामदेवलाई राजद्रोहको मुद्दामा कारबाहीको लागि पनि उक्त पत्रमा आग्रह गरिएको थियो ।
भारतीय वरिष्ठ चिकित्सक ए फताहुद्दिन बीबीसीसँगको कुराकानीमा यस किसिमको वक्तव्यको असर दीर्घकालीनरुपमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि मजस्ता स्वास्थ्यकर्मीहले युद्धजस्तै अवस्थाको सामना गरिरहेका छौं । हामीले हजारौंको ज्यान बचाएका छौं । यस किसिमको अपमानजनक र दु:खलाग्दो किसिमको वक्तव्य पढ्न पर्नु वास्तवमा नै दुर्भाग्य हो’, उनले भने ।
प’क्राउको मागबारे रामदेवले के भने ?
यो भिडियो सार्वजनिक भएसँगै विपक्षी कांग्रेस पार्टीका नेता गौरव गान्धीले उक्त भिडियो ट्वीट गर्दै रामदेवले सरकारलाई चुनौती दिएका छन्, अब के गर्ने सरकारको हातमा छ भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहलाई मेन्सन गरेका छन् ।